* Light Of Myanmar *: ရှေးမူမပျက် လုပ်ဆောင် သွားမှာလား?
Posted by * In Search of Truth * at 2:48 PM
This blogger looks like giving advise or standing at the right side. But actually they are trying to diverge our goal. They are pretending by giving different idea for people. But in fact,they want to know what our next steps are.
ကျနော်အကြံမကောင်းဘူးထင်ရင် လက်မခံပါနဲ့။ အဲဒါက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ် ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး Free Burma လို့အော်တာ အခုထက်ထိပဲ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြိုးစားပြီး လုံးဝ မအောင်မြင်ဖြစ်နေတဲ့ အစ်ကိုတို့ မူဝါဒအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ? ထုံးဆန်အတိုင်း နအဖ ပေါ်အပြစ်ပုံပြီး ရှေးမူအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားမလို့လား? ဒါဆိုရင်တော့ . . . . . . . . .
အကြံသစ်ကို ရှာဖွေဖို့က ကျနော့တာဝန် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လုပ်ရမယ့် အရေးပါ။ ကျနော် ထောက်ပြတာ နအဖကို လျှော့မတွက်ဖို့နဲ့ မိမိလုပ်ရပ်တွေပေါ် တော်လှပြီဆိုပြီးလည်း အထင်မကြီးဖို့ တင်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ ဖြစ်လာအောင်လို့ပါ